Jabulela izingcingo zevidiyo eziphephile nezingaziwa
Khuluma nabantu ongabazi futhi uthole abangane abasha
Ingxoxo ebukhoma i-OmeTV enye indlela ofuna ukuxoxa ngayo nekholi yevidiyo nabantu ongabazi abavela kuwo wonke umhlaba!
Ungazigcina ungaziwa ngokubuka okuqukethwe kepha udinga ukubhalisela ukudala okuqukethwe kwakho
Uhlelo lokusebenza olusheshayo lwe-OmeTV
U LIVE Chat interface engenamthungo ikunikeza ithuba lesikhathi njengenye indlela esheshayo yamasayithi afana ne-ometv.
U-LIVE Chat akuyona ipulatifomu yokuxoxa ngevidiyo ejwayelekile! Kuza nezitika eziningi ezihlekisayo zokwenza izingxoxo zakho zibe mnandi futhi zithokozise. Manje usungaxhumana nabantu ongabazi futhi wenze ukuxhumana okusheshayo nabo usebenzisa lezi zinamathelisi ezipholile nezimnandi. Lezi zilungele ukunonga izingxoxo zakho nanoma ngubani!
Iningi labafana abapholile namantombazane amahle
Ingxoxo ebukhoma ikunika ukufinyelela kubasebenzisi abaningi! Lokhu kusho ukuthi ngeke kube khona ukungabikho kwabantu ozoxoxa nabo futhi uxhumane nabo. Kuleplatifomu eyingqayizivele, ungathola abafana namantombazane amaningi ngendlela ofuna ukuba abangane ngayo. Kuyindlela ephelele yokuhlangana futhi uhlanganyele nabantu ongabazi abapholile njengawe!
Hlangana namantombazane e-ometv
Uma ukujabulele ukuxoxa namantombazane we-ome tv ngaphambili, i- U LIVE Chat izokuxhumanisa nezinye ezinhle kakhulu. Lawa mantombazane ashiye i-ome tv ukuze ajoyine i- U LIVE Chat ngentengo engcono. Ngakho-ke, uzothola inqwaba yamantombazane e-ome tv ukuze uhlanganyele futhi ujabule nawo. Thola amathalenta amahle kakhulu wokunakekela zonke izifiso zakho!